ROCKETSHIP: ENKOSI KUWE KUPHONONONGO LWEALBHAMU - IINDABA
I-albhamu yokuqala yeqela le-indie-pop kwiminyaka eli-13 ibiza umxube ofanayo we-erudition, ukuzibandakanya, kunye neemvakalelo ezinamandla ezikhuthaze ukuzinikela okunje ngenkolo ukusukela ekupheleni kweminyaka yoo-1990.
Dlala iTrek Andikwazi Ukukufumana ngokwaneleyoIrocketUkuhamba Ibhendi / Thenga
I-Rocketship kudala iluhlobo lwesenzo esingezantsi kwe-radar abalandeli abanxibelelana naso ngendlela eyoyikisayo. Inxalenye le ndlela yokuziva usondele mhlawumbi isuka kunxibelelwano lwebhendi ye-Sacramento kunye ne-indie pop, ethi iwonge uluntu kunye nobumnandi obenziwe ngezandla. Njengabanye abantwana base pop abavela e-Belle nase Sebastian ukuya kwiintlungu zokuba nyulu entliziyweni, i-Rocketship iphefumlelwe yi-Felt, iprojekthi ye-80s ye-UK indie auteur Lawrence. Kodwa i-albhamu yokuqala yeRocket Rocket ka-1996, Uncumo oluthile, Usizi oluthile , wayenamabhongo kwaye enziwe kakuhle kwinqanaba elaphikisa igama labo lesimo sokungakhathali kunye nokuthanda.
jay z ubukumkani yiza
Emva koko, iRocketship yachithwa, emva koko yaphela yonke. Ilungu elingapheliyo, imvumi kunye negitare uDustin Reske, elandelwa zii-albham ezimbalwa zeRocketship- 1999's ambient-leaning Umyezo woLonwabo , 2006 eclectic ngakumbi Naku Kuza… Irokhethi -Iqhosha elisezantsi-ke lokuba bebengaphandle kweeradars ngokupheleleyo. Ngoku isekwe ePortland, uReske uqokelele umgca omtsha wealbham yokuqala yeRocketship kwiminyaka eli-13, Enkosi kuwe . Ukufika kwakhona ngokutyhala okuncinci kwendabuko, ikwayi-albhamu yokuqala yeRocket ngokuhanjiswa ngokubanzi ukusukela kwinkulungwane ephelileyo. Kwaye kuhle ngendlela eyothusayo. Ukubuya kukaRocket Rocketship usaziva enomdla kakhulu, kuphela ngoku kufana nokudibana nomhlobo wakudala kwaye ufumanisa ukuba bakhule baba ngabantu abangamaziyo nabakhohlisayo. Nokuba yeyiphi enye into etshintshileyo, uReske ubonakalisile, kwakhona, ukuba iinjongo zesibindi kunye nenqanaba lokuthozama akufuneki zichaswe.
Ilungu le-hypnotic kunye nokugungqiswa kwekatala Enkosi kuwe iya kuba yinto eqhelekileyo kubantu abathanda umsebenzi weRocketship kwangoko, kodwa uReske akathembeli nje kwi-nostalgia. Endaweni yoko, iRocketship ivakala ngathi inamabhongo ngakumbi kunakuqala, ulonwabo lolutsha kwiqonga lokunika indawo yokuphumla kunye nobuhle obunomdla. Umahluko ocacileyo kukudityaniswa kuka-Ellen Osborn, umsebenzi wakhe odlulileyo uquka ukucula kwibhendi ye-Bee-Gees yabasetyhini bonke, njengemvumi ekhokelayo kwisininzi esikhulu seengoma ezili-10. Usebenza ngeendlela ezahlukeneyo kwaye uyoyikeka, ilizwi lakhe likhazimla apha kunye neentsiba phaya, njengoko isigunyaziso siyavuma. Kodwa ngaphezu kwako konke, uvakala njengomdlalo kulawulo lwayo nantoni na eyenziwayo kukuqamba. Oko kubalulekile, kuba yintoni emnandi ngakumbi Enkosi kuwe igcwele njani izimvo ezi ngoma.
Uncumo oluthile yayineendlela zokunxibelelana ezibonisa indlela eya kwizixhobo zomoya zokulandela, Umyezo woLonwabo , kodwa Enkosi kuwe iyaqhubeka. Ingoma nganye kwezi ivakalelwa ngokungathi ibekwe njengamagumbi amancinci, aneengcango zemigibe kunye neesigcawu ezibonisa njengoko uchitha ixesha uhlala kuzo. Izitshixo ezinamajukujuku, i-pinprick bass, kunye nolungelelwaniso olumaleko lwento engekho nzulu ngaphakathi ivulekele kumgaqo wolwimi oluthethwayo lwesiFrentshi kwaye yenye yeembongi zonyaka zemibongo solos kwelicala leSela Elikhulu. KuYintoni Usetyenziso lweeNcwadi, inqanawa yokundwendwela yenyanga ekhawulezileyo ngesiquphe iphuma kumngqungqo, ungxolayo. Kukho iphupha lomnqweno wamaphupha (i-A Terrible Fix), ukuzilolonga kwe-orchestral-tinged synth okusikhumbuza kutshanje Phumla -era Charlotte Gainsbourg (Ngaphandle kwangaphandle), kwaye nantoni na oyibizayo ngengoma enezinto ezihlekisayo zikaJohnny Marr, i-shoegaze whorls zikaKevin Shields, kunye neqela elalifakwe lilungu laseLaetitia Sadier (Ibhokisi yoMculo eyaphukileyo).
Lo mda wandisiweyo uyasebenza nakwiingoma zomculo. Ukunxila, ndihlala ndinxilile / Xa ndikunye nawe, u-Osborn ucula njengengoma yokuvula ekwindla, Under Streetlights Shadows, ukhawulezela ekuqaleni oziva kwii-medias res. Xa ndacela irente, uthengisile i-amp amp, yena uxoxa ngento engekho nzulu ngaphakathi. Phakathi kwe-drill-machine thump ye-Milk-Aisle Smiles, Reske uyabongoza kwisithandwa ngendlela ekubhekiswa kuyo kuJoanna Newsom Ubisi-Amehlo aMilili , ukwenza imvano-siphelo yentsingiselo kunye nokukuchukumisa apho. EsiXekweni, eFair, ethi veers ukusuka ePentangle -style folk ukuya eFleetwood Mac -kufanelekile ukucula, u-Osborn uyaxhuma nje nge-adroitly ukusuka kwi-Ren Faire oer ukuya kwi-ops emnyama yesitrato. Kuninzi, kwaye ukungena kuyo yonke into kuyonyango.
Enkosi kuwe yeyabo bonke abantwana abatshatileyo behlabathi, Reske utshilo . Kwiingoma zam ngoku ndisebenzisa isichazi-magama esibanzi, ukanti izifundo zibonisa ulangazelelo olufanayo lothando kunye nokunxibelelana ngokungasebenzi kunye nokuziqhekeza njengakuqala. Oko kuqhubeka kulula ukubamba kwiingoma apho isichazi-magama, umculo kunye nomculo, sithe ngqo. Andikwazi nje Ukufumana okwaneleyo kuwe kuswele ubumsulwa beklasikhi yeRocket Ndiyakuthanda njengeNdlela endandiqhele ukwenza ngayo , kodwa isengumsindo wengxolo, ingoma, kunye neemvakalelo. Okanye thabatha isiphelo andisazi isizathu sokuba ndisakuthanda, i-du-back-and-duet edibanisa i-Cure ne-Saint Etienne kwintlanganiso ye-rave. Thanda ubuxoki, uphinda ngokuzenzekelayo 'uMntu oMnye woMntu' ngoku, ukhalaza u-Reske, ecaphula ULoudon Wainwright . Ndiyitshangatshangise iflegi yam, unxibe uthando lwakho njengamazulu ngoku, u-Osborn uphindela, ecaphula UDonovan . Konke kudidekile kwaye kugqithisile ngokweemvakalelo njengomntu ofikisayo, kodwa kuyinkimbinkimbi kwaye kugcwele izingqinisiso njengomntu omdala.
imigca yombane ye-goddard
Enkosi kuwe yindlela ende esuka kwiRocket yokuqala engenakunqandeka engatshatanga, ngo-1994 Hayi, Hayi Ntombazana , kwaye okwangoku akukho kude kangako konke konke. U-Reske, oneshishini lokuhamba ngebhayisikile ejikeleze iPortland kwaye wenza umsebenzi weyadi ngezixhobo zesandla kuphela, usayazi indlela yokwenza into eneenjongo zobugcisa eziphakamileyo zibonakale zinomntu kwaye zizinzile njengokulima igadi. Abantwana abatshatileyo behlabathi banokuvela ngokumangalisayo.
ividiyo ephezulu yomculo 2016
isikhululo seenqwelomoya esikufutshane nemarfa texas
ngeveki yeveki umhlaba
yonke into iziva ingcono ngoku
u-exgirlfriend ophambeneyo miranda lambert